डाक्टरले चिर्दाचिर्दै पेटमा ७ टांका लगाएर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकी गर्भवतीको हेम्स अस्पतालमा शल्यक्रिया – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ डाक्टरले चिर्दाचिर्दै पेटमा ७ टांका लगाएर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकी गर्भवतीको हेम्स अस्पतालमा शल्यक्रिया
डाक्टरले चिर्दाचिर्दै पेटमा ७ टांका लगाएर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकी गर्भवतीको हेम्स अस्पतालमा शल्यक्रिया
सिन्धु खबर असार २०, २०७७ गते ६:४५ मा प्रकाशित
चौतारा । पेट सिजरिङ (चिर्दाचिर्दै) गर्दागर्दै ७ टाका लगाएर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकी सिन्धुपाल्चोककी गर्भवतीको काठमाडौंको हेम्स अस्पतालमा शुक्रबार सांझ शल्यक्रिया गरेर ३.८ किलोग्रामको बच्चा निकालिएको छ । खाडिचौरस्थित सदाबहार अस्पतालका डाक्टरले शल्यक्रिया गर्न खोज्दा पाठेघर र पिसावथैली जोडिएको भेटिएपछि उनलाई हेलिकोप्टरबाट राजधानी लगिएको थियो ।
हामीले सिजरिङ शुरु गरेपछि पाठेघर र पिसावथैली जोडिएको अवस्थामा भेटिएको सदाबहारका डाक्टर रोशन थापा श्रेष्ठले बताए । पाठेघरमा केही साना मासुका डल्ला (सिष्ट) जस्तो पनि देखिएको उनले बताए । पाठेघरबाट बच्चा निकाल्न कठिन हुने भएपछि काटिएको भागमा ७ टांका लगाएर गर्भवतीलाई हेलिकोप्टरबाट हेम्स लगिएको हो । अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा राजधानी लगिएपनि उनको सफल उपचार भएको छ । बच्चा र आमाको अवस्था सामान्य रहेको डाक्टर थापाले बताए ।
लिंसखुपाखर गाउँपालिका ७ की २४ वर्षीय निशा तामाङ बिहीबार नै सुत्केरी हुनका लागि सदाबहार अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । महिना पुगेर नर्मल सुत्केरी हुन आएकी उनलाई व्यथा नलागेपछि अस्पतालका डाक्टरले व्यथा लाग्ने औषधि दिएका थिए । औषधि दिएपछि रोशनीलाई व्यथा लाग्यो । तर उनको पाठेघरको मुख ३ सेन्टिमिटर भन्दा खुलेन ।
नर्मल सुत्केरी हुनका लागि पाठेघरको मुख १० सेन्टिमिटर खुल्नुपर्ने हुन्छ । सदावहारका चिकित्सक रोशनका अनुसार दुखाइ बढ्दै गएपछि बच्चा र आमाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै रोशनीको अप्रेशन गर्ने तयारी भयो । अप्रेसन गर्न उनलाई थिएटरमा लगियो । उनको सिजरिङ पनि गरियो । सिजरिङको सुरुवातमै रोशनीको पाठेघरमा सिस्ट देखियो । त्यसपछि सदावहारका चिकित्सक डराए ।
डा. रोशनले भने, `सिस्ट पन्छाएर बच्चा निकाल्न गार्हो भयो त्यसका लागि युरिनको डाक्टर चाहिन्छ हामीसँग युरिनको डाक्टर थिएनन् ।` सदावहारका चिकित्सकले रोशनीलाई तुरुन्तै काठमाडौं पठाउने तयारी गरे । तयारी गरेको दुई घण्टापछि मात्रै रोशनीको उद्धार भयो ।
रोशनीको हेम्स अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ पदमराज पन्तको नेतृत्वमा डा. अच्युत पौडेल, डा. रोशन र सुनिता पुनले आधा घण्टामै अप्रेसन गरेर बच्चा निकाले । सुत्केरीसँगैं डा रोशन आफै काठमाडों गएका थिए । आवश्यक तयारी विनै सुत्केरी गराउँदा यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको देखिन्छ । भाग्यले रोशनी र उनको बच्चा बाँच्यो । सदावहारले सुत्केरी हुन आउने महिलालाई अप्रेसन गरेर बच्चा निकाल्ने गरेको घटना धेरै भएको स्थानीयले बताएका छन् ।